Wasiirka Gashandhiga Somaliland oo laga baajiyey imaanshaha Badhan. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland / Wasiirka Gashandhiga Somaliland oo laga baajiyey imaanshaha Badhan.
Wasiirka Gashandhiga Somaliland Ciise Axmed Xawar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa malmahan kusugnaa meelo kamid ah degaanka Gobolka Sanaag,waxaana uu soo gaaray Magaalada Hadaaftimo halkasoo uu doonayey inuu uga sii gudbo Magaaladda Badhan,waxaase ka hor tagay ciidanka nabadgelyada Gobolka ee Puntland.
Wararka hoose ee Horseed Media helayso waxaa ay sheegayaan in wafdiga wasiirku degaanka hadaaftimo kula kulmeen xaalad ciidan oo ku adan iska hortaga magaalada badhan,wallow uu soo kala dhex galay Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan.
Wafdigii wasiirka Gashandhigu waxaa ay dib ugu laabteen deegaanka Ceerigaabo oo ay markii hore kazoo kicitimeen,waxaa socdaalka wasiirka ka hadlay masuuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo ku tilmamay inuu yahay mid qar iska soo xornimo ah oo aanu ka fiirsan.
Horseed Media .net